အချစ်ကြီးပြီး အားငယ်တတ်တဲ့ B သွေးလေးတွေ အကြောင်း – XB Media Myanmar
အချစ်ကြီးပြီး အားငယ်တတ်တဲ့ B သွေးလေးတွေ အကြောင်း
B သွေးလေးတွေဟာ တယောက်တည်း အေးအေးဆေးဆေး နေချင်ကြသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အားလပ်တဲ့ အချိန်တိုင်း အခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း နေရင်း ဖုန်းတစ်လုံး နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေ တတ်ပါတယ်။
သိပ်မခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ရင် ခပ်တည်တည် နေတတ်ပြီး အရမ်း ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ရင်တော့ နားညည်းအောင် ပြောတတ်တာ B သွေး တွေပါ။ လူတိုင်းကို မခင်တတ်လို့ မာနကြီးတယ်လို့ အထင်ခံရတတ်ပြီး ပေါင်းကြည့်မှ တကယ်ကို ရိုးသားဖြူစင်မှန်း သိကြတာပါ။
မိသားစုထဲမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်း ကြားထဲမှာ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကို ပိုဂရုစိုက် ပိုချစ်တာ လိုချင်တတ် ကြပါတယ်။ အလိုလိုက် ခံရရင်လည်း အရမ်း ပျော်တတ်ကြပါတယ်။ အရမ်းခင်တဲ့ လူတွေအပေါ် တကယ့်စိတ်ရင်း မပါဘဲ ချစ်စနိုးနဲ့ အနိုင်ကျင့် တတ်သလို ကိုယ့်ကို အနိုင်ကျင့်ရင်လည်း အလျှော့ပေး တတ်ပါတယ်။
ခဏခဏ စိတ်ကောက်တတ်ပီး ဘယ်သူမှ ပြန်ချော့စရာ မလိုပဲ အလိုလို စိတ်ကောက် ပြေသွားတတ်တာလည်း B သွေးတွေပါပဲ။
၀မ်းနည်း လွယ်ပီး မျက်ရည် အကျ မြန်တတ်ပါတယ်။ ပျော်စရာကိစ္စ တစ်ခုကို အကြာကြီး မခံစား တတ်ပေမယ့် ၀မ်းနည်းစရာ ကိစ္စနဲ့ ကြုံလာတဲ့အခါ ပြန်တွေးလိုက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်လိုက် မျက်ရည်ကျလိုက် ဖြစ်နေတတ် ကြပါတယ်။
အရမ်း ကြိုက်တဲ့ သီချင်း တစ်ပုဒ်ကိုပဲ ထပ်ခါထပ်ခါ နားထောင် တတ်တာလည်း B သွေးတွေရဲ့ စရိုက်တစ်မျိုးပါ။ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို အချိန် ခဏလေးနဲ့ တတ်မြောက်ပေမယ့် စိတ်မ၀င်စားတဲ့ အကြောင်းအရာ ဆိုပါက မည်သို့ပင် အကျိုးရှိစေကာမူ လှည့်မကြည့် တတ်ကြပါ။
အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင်တော့ အားနည်းချက် အနည်းငယ် ရှိတတ် ကြပါတယ်။ သံသယစိတ် အနည်းငယ် ၀င်တတ်ပီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း မယုံကြည်တတ် ကြပါဘူး။ အချစ်ရေးထက် မိသားစုအရေးကို ပိုဦးစား ပေးတတ်ကြပါတယ်။ မိသားစုအတွက် အမြဲ ကြိုးစားနေပီး စိတ်ချမ်းသာ ပျော်စေချင်တာ B သွေးတွေပါ။
B သွေးပိုင်ရှင်တွေဟာ ဒေါသထွက်နေတဲ့ အချိန်ဆိုရင် မိုးမမြင် လေမမြင်ပါပဲ.. ။ သူတို့စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့အတိုင်း လုပ်တတ်ကြတယ်..။ အရာဝတ္ထု တခုခုကို အာရုံရနေရင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိမထား ကြတော့ဘူး..။ သူတို့လုပ်နေတဲ့ အရာကိုပဲ အာရုံစိုက် လုပ်နေတတ် ကြတယ်..။
လူတစ်ယောက်ကို ချစ်မိပီ ဆိုရင်လည်း အသဲအသန်ပါပဲ သူတို့ ချစ်မိနေတဲ့သူ ဘယ်လောက်ပဲ ဆိုးသွမ်းနေပါစေ ။ အဲဒီ ဆိုးသွမ်းမှုတွေကို မမြင်နိုင် ကြတော့ဘူး..။ လိမ်ပြောနေတာကို သိနေရင်တောင် ဖြေပြီး တွေးတတ်ကြတယ်။
လုပ်စရာရှိတာကို သူတို့ အသိဥာဏ်နဲ့ စဉ်းစားပြီး သွားလုပ်မဲ့ အချိန်မှာ တယောက်ယောက်က ကိုယ်သွားလုပ်မဲ့ အရာကို လက်ညှိုးထိုး ခိုင်းလိုက်ရင် စိတ်ထဲမှာ သိပ်ပီး မကျေနပ်ကြဘူး။ ဘုဂလန့် တိုက်ချင်ကြတယ်…။
သူတို့ စာဖတ်နေတဲ့ အချိန် TV ကြည့်နေတဲ့ အချိန် တယောက်ထဲ ဘာရယ်မဟုတ် ငုတ်တုတ်ထိုင် စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာ တယောက်ယောက်က လှမ်းခေါ်ရင် မကြိုက်ကြဘူး မဖြစ်မနေ ပြန်ထူးရမယ် ဆိုရင် ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အသံနဲ့ ပြန်ထူးတတ်ကြတယ် …။
သူတို့စိတ်ထဲမှာ သဘောမကျတဲ့ သူတွေဆို လုံးဝ စကားမပြောချင်ကြဘူး ။ မဖြစ်မနေ စကားပြောရမယ် ဆိုရင်တောင် ဝတ်ကျေတန်းကျေပဲ ပြန်ပြောတတ်ကြတယ်…။ အဲဒီလူနဲ့ မပတ်သတ်ချင်တော့ဘူး ဆိုရင် ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ကို စကားမပြောချင် ကြတော့တာ.။
အရမ်းသွားချင်တဲ့ နေရာတွေ ဆိုရင် တယောက်ထဲ ဖြစ်နေပါစေ ရောက်အောင် သွားတတ်ကြတယ်. ။ .မသွားချင်တဲ့ နေရာဆိုရင် ထမ်းခေါ်ပါ့မယ် လိုက်ခဲ့လို့ ပြောရင်တောင် မလိုက်ချင်ကြဘူး….။
သူသွားချင်တဲ့ နေရာဆိုရင် သွားသင့်လား မသွားသင့်ဘူးလား ဆိုတာ မစဉ်းစားတော့ဘူး ရောက်အောင်ကို သွားတတ်ကြတယ်….။
သူတို့တွေဟာ အရမ်း ဟန်ဆောင် ကောင်းကြတယ်…။ သူတို့ အရမ်း ချစ်တဲ့ခင်တဲ့ သူတွေပေါ်မှာပဲ ဟန်ဆောင်ကောင်းကြတာပါ…။ သူတို့ မခင်တဲ့သူ သံယောဇဉ် မရှိတဲ့သူတွေ အပေါ်မှာတော့ ဟန်ဆောင် မကောင်းကြပါဘူး…။
သူတို့တွေဟာ အရမ်း အရယ်သန်ကြတယ်…စိတ်ပျော်ရွှင်နေတဲ့ အချိန်မှာဆို ပြုံးရယ်ခြင်းတွေဟာ အချိန် တော်တော်ကြာထိ ရပ်တန့် မသွားကြဘူး…။ စိတ်မပျော်ရွှင်တဲ့အခါ တစ်ယောက်ယောက်က ဟာသ လာပြောနေပါစေ ပြုံးရယ်ခြင်း မရှိဘူး တည်ငြိမ်စွာပဲ နေတတ်ကြတယ်။
သင်ဟာ အရမ်းချောတဲ့ အထဲမှာ မပါပေမဲ့ သင်ဟာ လူအများ စိတ်ဝင်စားခြင်း ခံရတဲ့ အထဲမှာတော့ အမြဲ ပါနေတတ်ပါတယ်။ တနည်းပြောရရင် သင်ဟာ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ အသွင်တမျိုးကို ပိုင်ဆိုင် ထားပါတယ်…။
သင်ဟာ မွေးထဲက ပြည့်စုံတဲ့ သူတစ်ယောက် မဟုတ်ပေမဲ့ သင်ဟာ အရမ်း ဆင်းရဲသော သူတစ်ယောက် အဖြစ်ကိုလဲ ဘယ်တော့မှ မရောက်ရှိပါဘူး။ သင်ဟာ ဥာဏ်ရည် မြင့်မားမှု နဲ့ ဖြတ်ထိုးဥာဏ် ကောင်းတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။
သင့်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ဓာတ် ကိုယ်ချင်းစာမှု သူတစ်ပါးအား သနားတတ်သော စိတ်တွေဟာ သစ်ပင်ရဲ့ အမြစ်လို မွေးရာပါ သန္ဓေတည်ခဲ့သော သူတစ်ယောက်ပါ။ သင်ဟာ အားနာရင်လည်း အရမ်း အားနာတတ်ပေမဲ့ အားမနာမိတော့ရင်လည်း လူတစ်ယောက်ကို ရစရာမရှိအောင် ပြောဆိုတတ်ပါတယ်။
သင်ဟာ မာနကြီးတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပီး မဟုတ်တာ ပြောခံရရင် သေးသေးတင် မခံနိုင်သော သူတစ်ယောက်ဖြစ်မှန်း ဝန်ခံလိုက်ပါ။ သင်ဟာ အချစ်ကြီးသော သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပီး ချစ်သူအပေါ် သဝန်တိုမှု လွန်ကဲသော သူတစ်ယောက် ဖြစ်မှန်းလည်း ဝန်ခံလိုက်ပါ။
ထို သဝန်တိုမှုတွေ အချစ်ကြီးမှု တွေကြောင့်ဘဲ သင်ဟာ အချစ်မှာ မအေးချမ်းနိုင်ဘဲ ချစ်သူနဲ့ လမ်းခွဲမှု တွေ မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်နေသော သူတစ်ယောက်ပါ။
B သွေးလေးတွေ အချစ်ရေး တည်မြဲချင်ပါသလားး?
လက်ရှိ တွဲနေတဲ့ ချစ်သူကို အကန်း တစ်ယောက်လို မျက်စိမှိတ်ပီးး ချစ်လိုက်ပါ။ အရာရာ နားလည်မှု ပေးလိုက်ပါ။ တခါတရံ ပေါ်လာတဲ့ မိ၂ရဲ့ မာနတွေကို တံတွေးနဲ့အတူ မြို ချ လိုက်ပါ။ ဒါဆို သင်ဟာ ဒီလောကမှာ အချစ်ကံအကောင်းဆုံးလူ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ အချစ်ကြီးမှုဟာ သင့်အတွက် သေဆေး အဆိပ်တစ်ခွက်လို ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာ သင် ဒီတစ်သက် လုံးဝ လုံးဝ မမေ့ပါနဲ့ ။ ထပ်ပြောပါမယ် သင့်ရဲ့ အားနည်းချက်ဟာ သင့်ရဲ့ အချစ်ကြီးမှုပါဘဲ။
နှစ်သက်ရာ မျက်လုံးပုံစံ ရွေးချယ်၍ သင်၏ စိတ်နေစိတ်ထားကို ဖော် ထုတ်ကြည့်ရအောင်
အပတ်စဉ် ဗေဒင်ဟောစာတမ်းကဏ္ဍ (၁၃-၁-၂၀၁၉ မှ ၁၉-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ)